Famokarana haricots verts nohatsaraina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Sarotra ny famoaham-bokatra ao amin’ny Kaominina Vohimarina Lamosina. Voatery amidy mora amin’ny mpanangom-bokatra ny vary, ny voanjo, ny mangahazo. Mividy lafo indray anefa ny tantsaha rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Tsy vitsy ireo zara raha mahita hatokona mandritra izany ka mandry fotsy. Miraviravy tanana ny olona eo amin’ny fiompiana satria ananam-pahavalo. Tonga tany an-toerana àry ny iraky ny orinasa LECOFRUIT. Nentaniny ny tantsaha hirotsaka amin’ny fambolena haricots verts ara-boajanahary (biologique). Fianakaviana 85 no misehatra amin’izany ao an-toerana ankehitriny. Samy mamboly amin’ny velaran-tany mirefy 1 ara sy sasany ny tsirairay. Tanjona ny fampananan’asa miteraka fidiram-bola malaky ho an’ny tantsaha. Fomba iray ihany koa izany hiadiana amin’ny fahantrana. Efatra ambiny efapolo andro aorian’ny nambolena azy dia efa azo otazana ny vokatra. Mitondra fandrosoana eo amin’ny faritra izany. Afaka mitahiry ny vokatra hatao sakafo mandavan-taona ny mponina.
Nisy ny sivana nataon’ny orinasa nijerena ny traikefan’ny tsirairay. Tamin’izany no nanendrena ireo mpiandraikitra telo mirahalahy ho mpitarika (Chef Secteur). Nomena fiofanana manokana tao Ambositra sy tany Antsirabe, misy ny toeram-pamokaran’ny orinasa izy ireo. Taorian’ny fiofanana, nanankinana andraikitra avy hatrany ireto mpitarika ireto ho mpanentana sy hampita ny traikefa azony amin’ny tantsaha namany. Randriamboavonjy Jean Chrysostome no mpiandraikitra ao Vohimarina. Loha laharana amin’ny asa ny fanamboarana tranon-jezika. Atomboka ny fanamboarana ny zezika rehefa vita ny trano. Akora natoraly no anaovana azy. Toy ny bozaka, ahi-maintso, zezi-pahitra. Azo ampiasaina daholo ny ahitra rehetra ankoatra ny ravina kininina sy ny ravi-kesika. Masaka ny zezika rehefa avy naotrika roa amby efapolo andro. Ka azo ampiasaina avy hatrany.
Mamatsy masomboly amin’ny vidiny mirary ho an’ny tantsaha ny orinasa. Amin’ny fotoam-pamokarana vao omena ny vidiny. Maro ny aretina ateraky ny fihinana ny vokatra simika amin’izao vanim-potoana iainantsika izao. Natao mihitsy ity fomba fiasa iray ity mba hahazoana vokatra natoraly. Misy biby kely mpanimba voly antsoina hoe: komavo sy biby traka na fanday aty amin’ny faritra. Tsy azo atao ny mampiasa fanafody simika fa ny orinasa ihany no miantoka izany. Fanafody biby biolojika no omeny sady manazava ny toromarika amin’ny fampiasana azy. Mividy ny vokatra eny am-potony ny oriasa. Any Eoropa sy Etazonia kosa no anondranany azy.
Ankoatra ny fambolem-bary, natao asa fivelomana manokana mihitsy ny voly haricots verts. Tanjona amin’ny 2021 ny hamokarana intelo. Manentana ny tantsaha namany ny tompon’andraikitra mba hanatevin-daharana azy ireo amin’ity seha-pamokarana iray ity. Mbola midadasika tsara manko ny tany azo volena amin’iny faritra iny. Malalaka ihany koa ny tsena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Marihina fa raha ny aty amin’ny faritra atsimo, dia mbola ny ao Vohimarina Lamosina no misitrika ity seha-pihariana ity. Midadasika kosa izy amin’ny faritra hafa toa an’Ambositra sy Antsirabe. Voly tsy dia mila fikarakarana betsaka no sady tsy mandany andro ny fambolena ity karazana haricot vert ity. Manondraka ny maraina, avy eo mbola afaka mandeha manao asa hafa. Ho voavaha tsy ho ela ny olana amin’ny famoaham-bokatra. Ny volana mey ho avy izao, hanomboka ny fanamboaran-dalana araka ny tafa nifanaovan’ny solontenan’ny tantsaha tamin’ny Solombavambahoaka voafidy tao Vohibato, ny Kolonely Randrianatoavina Martin. Ankoatra ny fanatsarana ny lalana, iankinan’ny toe-karena isam-pianakaviana ny fandriam-pahalemana. Koa aoka samy handray ny andraikitra manandrify azy ny tsiriray mba hiadanan’ny daholobe.